Wikileakes oo shaacisay sir ku saabsan qorshaha Kenya ee faragelinta Soomaaliya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Wikileakes oo shaacisay sir ku saabsan qorshaha Kenya ee faragelinta Soomaaliya
Wikileakes oo shaacisay sir ku saabsan qorshaha Kenya ee faragelinta Soomaaliya
mareegta diraha dowladdaha Caalamka faafisa ee la yirahdo Wikileaks ayaa soo bandhigtay dukumiinti muujinaya in Kenya ay dooneysay ka hor 2010 kii in ay sameyso maamul iyada gacan saar la leh oo lagu magacaabayo Jubbaland kana howl gala koofurta Soomaaliya, kaas oo u suura gelinaya in ay ciidan soo geliso Soomaaliya.
Sirtan waxaa lagu xusay in Madaxweynihii hore ee Kenya Mwai Kibaki, Ra’isal wasaarihii hore Raila Odinga, Wasiirkii hore ee difaaca Yuusuf Xaaji iyo Wasiirkii Amniga George Saitoti ay la kulmeen caawiyihii Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka Alexander Vershbow, si ay uga codsadaan in Kenya ay ku lug yeelato xasilinta Soomaaliya iyada oo u mareysa maamul iyada taabacsan oo ka dhisma Magaalada Kismaayo.
Kulanka oo dhacay 26 Janaayo 2010 kii, ayey Madaxda Kenya waxay ka codsadeen Dowladda Mareykanka in ay taageerto qorshahooda, ayagoo Xilligaas tababartay Ciidamo badan oo Soomaali ah oo ay u diyarisay Dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaliya ka jirtay hayeeshee ciidankaas ma noqon kuwa ku biira ciidamada dowladda Soomaaliya, sida warbihinta lagu sheegay.
Ciidamada ayaa tababaraysay ayaa lagu sheegay inay gaarayeen 2,000 oo askari, kuwaasi oo la sheegay in ay ugu talo gashay inay ka howlgalaan gobalada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe.
Raila, ayaa u sheegay Dowladda Mareykanka in ay doonayaan in ay xiraan Xerada Dhadhaab ee Gobolka ay Soomaalida degto ee gobalka Waqooyi Bari ee Kenya.
Wasiirkii Difaaca Kenya Yuusuf Xaaji iyo wasiirkii Amniga ee xiligaasi George Saitoti ayaa Maraykanka u sheegay in wel-wel wayn ay ka qabaan xadka Soomaliya iyo Kenya, kwaasi oo sheegay in bishiiba ay soo galaan 6 kun oo qaxooti Soomaali.
George Saitoti ayaa ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay wadankaasi intii uu socday qorsha Kenya.
Maraykanka ayaa si toos ah u diiday in la xiro xerada qaxootiga Dhadhaab iyo in ay ku lug yeelato arimaha Soomaliya, inkastoo markii dambe ay u muuqatay in laga ogolaaday.
Ciidamada oo ayaa Soomaliya soo galay sanadkii 2011 kii xiligaas oo ay Kenya ku mar mar-siyytay in Al-shabaab ay dhibaato ka gaysatay gudaha kenya, ayadoona u jeedkeedu ahaa in ay Soomaliya soo gasho.
Lix sano oo ciidamadeedu ay joogaan Soomaaliya ayaa waxaa lagu timaamayaa inay yihiin kuwa ugu liita ee qaybta ka ah howl-galka Midowga Africa ee AMISOM, waxaana ay la kulmeen intii Ciidankeedu uu joogo Soomaaliya weeraro waa wayn, kuwaasi oo ka dhacay gudaha Kenya, waxaana ka mid ahaa kii lagu qaaday Jaamacadda Gaarisa halkaasi oo lagu dilay dadka ka badan 147 qof oo arday u badanaa. Sidoo kale waxaa Soomaaliya looga dilay askar badan oo ay ka mid yihiin kuwii ku dhintay weerarkii Ceel-Cade.
Previous articleWajiga koowaad ee doorashada Aqalka Sare ee Galmudug oo la soo geba-gebeeyay.
Next articlePuntland oo markale soo magaawday xubnaha Aqalka Sare + dhagayso.